Mpanamboatra sy mpamatsy ravina acrylic sheet China Gokai
Ny akrilika, fantatra koa amin'ny hoe plexiglass voatsabo manokana, dia vokatra solon'ny plexiglass. Ny boaty jiro vita amin'ny akrilika dia manana ny mampiavaka ny fampitana hazavana tsara, loko madio, loko manankarena, tsara tarehy sy malama, raha jerena ny vokany na andro na alina, androm-piainana lava ary tsy misy fiatraikany amin'ny fampiasana. Ho fanampin'izany, ny acrylic sheet dia azo ampifangaroina tsara amin'ireo mombamomba ny plastika vita amin'ny plastika sy ny fanontana amin'ny efijery avo lenta mba hahafeno ny filan'ny orinasa.
Ny suction acrylic no endrika tsara indrindra amin'ny dokambarotra ety ivelany mba hanatsarana ny haavon'ny fivarotana orinasa sy hampivondrona ny sarin'ny orinasa. Ny "acrylic" dia teny nadika, ary ny teny anglisy dia ACRYLIC. Fitaovana simika io. Ny anarana simika dia "PMMA" dia an'ny polyacrylate, fantatra amin'ny anarana hoe "vera biolojika voatsabo manokana". Ao amin'ny indostrian'ny rindrambaiko, akora akrilika amin'ny ankapobeny dia miseho amin'ny endrika granules, ravina, fantsona sns.
Ny akrilika dia fandikana asidra akrilika sy akora simika methacrylic avy amin'ny teny anglisy. Anisan'izany ny monomères, ravina, granules, resins ary ny fitambarana, ny takelaka akrilika dia vita amin'ny polymerized avy amin'ny methyl methacrylate monomers (MMA), izany hoe polymethyl methacrylate (PMMA) sheet plexiglass, izay nalaina avy amin'ny anarana varotra "Oroglas" (takelaka PMMA), ary avy amin'ny "Glass Organic" (izany hoe plexiglass).
Ny acrylic Sheet Bunnings dia soloina maivana ho an'ny vera izay manana kalitao optika tsara kokoa ary ara-toekarena kokoa. Manome fanodinkodinana ambany izy io ary tsy ho mavo aorian'ny fihanaky ny tara-pahazavana maharitra. Manolotra fanoherana fiantraikany efatra heny mihoatra ny vera izy io.
♥ Fampitana hazavana tena tsara hatramin'ny 93% miaraka amin'ny famirapiratanana avo
♥ Fanoherana tsara ny toetrandro, anti-UV, ary mora diovina
♥ Azo zahana tsara, mety amin'ny fizotran'ny mekanika sy ny famolavolana hafanana
♥ fanoherana tsara ny fiantraikany sy ny harafesin'ny simika
♥ Doko mora foana ary mety amin'ny haingon-trano ambonimbony toy ny famafazana, fanontana silkscreen, firakofan'ny banga, sns.
♥ Hamafin'ny ety ambonin'ny tany toy ny firaka aliminioma sy fanoherana ny vodiny
♥ Milamina tsara mandritra ny 40 degre ambanin'ny zero hatramin'ny 90 degre
MOQ 1 taonina na 50 pcs tanteraka
Fomba fonosana Fonosana anatiny: Taratasy Kraft na sarimihetsika PE rakotra amin'ny lafiny roa
Fonosana ivelany: Trano fisaka na hazo
Daty nanomezana Manodidina ny 15 andro fiasana aorian'ny fandoavana ny vola amin'ny kaontinay
Andalana fanaterana FOB Shanghai na Ningbo
Fepetra fandoavana T / T, L / C, Paypal
Teo aloha: ravina acrylic manjelanjelatra
Manaraka: acrylic plexiglass